Sheekada ka dambeeysa racfaannada usbuucan laga qaatay 3 kiis oo ISIS ah
By Laura Yuen [Read the story in English]
Qareennada saddex nin oo ka soo jeeda Magaalooyinka Mataamaha ah oo lagu helay dambi ah inay isku dayayeen inay ku biiraan kooxda argagixisada ah ee ISIS ayaa racfaan maxkamadeed ka qaatay xukunnadooda usbuucan.Doodda afka ah ayaa la qorsheynayaa in Khamiista laga hor jeediyo guddi saddex garsoore ah oo ka socda maxkamadda Wareegga Siddeedaad.
Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaatid.
Waa kuwee nimanka, maxaase lagu xukumay?
Guuleed Cumar, 23, Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Dauud, oo labaduba 24 jir ah, ayaa waxay ahaayeen saddex ka mid ah sagaal nin oo lagu soo oogay kiiska shirqoolkii ISIS ee Minnesota – waana saddexda keli ah ee kiisaskooda geeyay maxkamad halkii ay ka qiran lahaayeen dambiga. Waxa lagu xukumay inay isku dayeen inay ISIS kula biiraan Suuriya, iyo in ay ku tashadeen inay dil ka geeystaan meel ka baxsan Maraykanka.
Inkastoo aan lagu eedeynin qorshe ah inay weerarro ka geeystaan carriga Maraykanka oo haddana aysan gaadhin Suuriya, caddaynta lagu soo bandhigay maxkamadeyntii ayaa muujisay inay qaadeen tallaabooyin la taaban karo oo ay halkaas ku tagaan. Maxkamadeynta, oo dhacday gugii 2016, ayaa soo jiidatay xiise caalami ah waxayna daaqad u furtay ISIS dacaayaddeeda hormarsan iyo farsamooyinkeeda qorista.
Muxuu ku saleeysan yahay racfaankooda?
Qareennada ragga ayaa ka dacwoonaya tilmaamihii xeerbeegta ee Judge Davis uu bixiyay oo la xidhiidha dacwadda ahayd shirqoolkii dilalka laga geeysan lahaa dibedda dalka. Xeerbeegga waxaa la faray in ay xukumaan haddii ragga ay aqbaleen in ay ku dhaqmaan "arxan-darro iyo dayac naxariis la’aan ah ee ku aaddan cawaaqibka nolosha bini'aadamka.”
Taasi, siday qareennadu ku doodayaan, waa heer ka duwan waxa loo baahan yahay, waxayna u oggolaatay in eedaysanayaasha lagu xukumo shirqool dil iyagoo kaliya ku tashaday inay ku biiraan koox argagixiso ah.
Waxaa intaa dheer, qareenka cusub ee Maxamed Faarax, Jordan Kushner, wuxuu ku doodayaa in macmiilkiisu uusan helin wakiil ku filan, ayna ahayd in la siiyaa qareen beddel ah maxkamadeeynta ka hor. Qareenkii hore ee Faarax, Muraad Muxammad, ayaa dalbaday in uu baxo kiiska maalmo ka hor inta aan maxkamaddu bilaaban.
“Faarax eedeymihiisa ah in aan la tusin helitaankii iyo inuusan qareenkiisa la laheyn xiriir macquul ah ayaa ku filan muujinta in laga xayuubiyay xuquuqdiisa Beddelka Lixaad ee ah inuu helo qareen ku filan iyo inuu gacan ka geysto difaaciisa," ayuu qoray Kushner.
Qareen kale oo markii hore loo shaqaaleysiiyay si uu u matalo Faarax ayaa ka baxay kiiska ka dib markii karraanigiisa sharciga, oo ah imaam ka soo jeeda St. Paul, lagu eedeeyay in uu farageliyay kiisaska eedaysanayaasha kale.
Maxay ku doodayaan xeer ilaalinta federaalka?
Xukuumaddu waxay sheegtay in maxkamadda rafcaanka ay tahay in ay taageerto xukunka maxkamadda hoose, iyo in tilmaamahii xeer-beegta ay sax ahayd. Waxay kaloo sheegeen in xukunnada tobanaanka sano gaadhaya ay yihiin kuwo caddaalad ah, iyo in saddexda nin ay wajahayeen xabsi daa'in. Kirkpatrick ayaa sheegay in Judge Davis uu go'aansaday in uu magacaabo "khabiir ka hortagga xagjirsiinta" si uu u qiimeeyo eedaysanayaasha.
Xeer-ilaaliyeyaasha ayaa sidoo kale sheegaya in dhaqanka Cumar, Dauud iyo Faarax aan la barbardhigi karin eedeeysanayaasha kale ee dambiga qirtay. Kirkpatrick waxa uu qoray in Cumar uu gacan ka geystay siddeed nin oo ku biiray shirqoolka isla markaana uu ku dhacay dambi been u sheegid maxkamad ah markii uu u istaagay inuu iska difaaco maxkamadeeynta; ka qayb qaadashada Dauud ee shirqoolka ayaa socday bilawgiisa illaa dhammaadkiisa; wuxuuna Faarax marar badan isku dayey in uu ku biiro ISIS.
by Sara Porter, MPR News 6/13/2018 11:56:56 PM